Amaski → Izembatho ezisebenzayo • Imfekethiso yekhompyutha ye-P & M
Imaski evikelayo kungasiza kakhulu ekuvimbeleni ukusakazeka kwezifo ezithile ezithathelwanayo zohlelo lokuphefumula. Kunjalo isihlangu esihle sohlelo lwethu lokuphefumula. Imaski enjalo, emboza impumulo nomlomo, ivimbela ukungena kwezakhi eziyingozi, kepha futhi ivimba izandla ezingcolisiwe ukuthinta ubuso. Noma kunjalo, ukugqoka imaskhi akuqinisekisi ukuvikeleka ekuthelelekeni.
Ukusetshenziswa kwemaski yokuvikela kufanele kuhlanganiswe nezinye izindlela zokuvimbela ukutheleleka.
Omunye wemithetho ebaluleke kakhulu ukulandela umthetho inhlanzeko yezandla futhi uhlelo lokuphefumula, kanye nokugwema ukuthintana eduze, kungcono ukugcina ibanga okungenani lamamitha elilodwa ukusuka kwabanye. Ngokusebenzisa le mithetho embalwa elula sisiza kakhulu ukugwema ukuthintana naleli gciwane.
Imaski evikelekile ihlukaniswe:
Okuningi kuya ngezinto ezibonwe kuwo. Imaski njengengxenye yezingubo zokusebenza kungaba yingxenye yezingubo zansuku zonke ezidingekayo zomsebenzi. Okuvame kakhulu emakhemisi kwenziwa nonwovens, ukusika okuqondile futhi okulula ukukufaka, kepha kufanele kulahlwe ngemuva kokusetshenziswa kokuqala.
Isifihla-buso sokuvikela Ukotini obumbethe omnyama obuthakathaka siyatholakala esitolo sethu se-inthanethi >>
Imaski yekotoni zisebenza kakhulu kangangokuba kwanele ukuzicubungula kumazinga okushisa aphezulu ukuze ukwazi ukuzisebenzisa futhi. Ngale njongo, sekwanele ukugeza ngamadigri angama-60, ungawasabalalisa nawokuwasabalalisa ngama-ironing ngamandla aphezulu noma ngokubilisa emanzini abilayo. Futhi, ukukhipha amagciwane imaski ngamalungiselelo enziwe ngoshukela okungenani ama-70% kuzosebenza. Mane ufafaze imaskhi ngoketshezi bese ulindela ukuthi lome.
Ngaphandle komqondo osabalele ngokungaphumeleli kokuvikelwa kwe-mask, kufanele unake iqiniso lokuthi ngisho nomamaski ongaphelele ungadala ijazi lokuzivikela, eliqhathaniswa nemiphumela yebanga elinconyiwe lamamitha ayi-2 koxhumana nabo.
Ungagqoka kanjani imaski yobuso uma kunesidingo amahora amaningi?
Ngeshwa, kwabaningi bethu, ukugqoka imaski kuyinto ekhathazayo, ikakhulukazi amahora amaningi ngosuku. Ungahle uzizwe ungaphefumuli noma ulele ngenxa ye-oxygen encane.
Ukudambisa ukungaphatheki kahle okubangelwa ukugqoka imaski njalo, udinga nje ukukhumbula imithetho elula. Okokuqala, gqoka imaski kuphela uma kunesidingo. Uma singenakho ukuxhumana nabantu abavela ngaphandle futhi singekho ezindaweni zomphakathi, kufanelekile ukuthi sikulande, noma imizuzu embalwa. Ikhefu elifushane lizokuvumela ukuthi uphumule futhi u-oxygenate.
Kuyafaneleka futhi ukuthola amaski ambalwa angavuselelwa. Ngokwezibalo, umuntu oyedwa uthenga amaski angaba ngu-8-10 (futhi uwathenga uma esegugile), ukuze akwazi ukushintsha emini futhi awawashe - okufana nendlela esenza ngayo ngezingubo zangaphansi. Uma kufanele sibe sendaweni evaliwe, kufanele futhi ukuvula iwindi nokuphefumula ngokujulile. Sizobona umehluko endleleni ozizwa ngayo njalo.
I-Streetwear blue mask yokuvikela umlomo namakhala etholakala esitolo sethu se-inthanethi >>
Imaski ingasisiza kanjani empilweni yansuku zonke?
Imaski yenzelwe ukuvikela umgudu wethu wokuphefumula. Yize kukhuphuka ukuthandwa kwayo ngenxa yalesi sifo, kufanele sinake ukuthi kwezinye izimo ukusetshenziswa kwaso kuzosisiza nokuthi sivikele impilo yethu.
Sekuphele izinyanga eziningi sithola imininingwane kwabezindaba mayelana naleyo yamanje umbiko we-smogkusuka lapho ungabona khona ukwanda okuthile kokungcola ngesikhathi sokushisa. Ukuqina kwayo okukhulayo kuyingozi kakhulu kuma-agglomerations amakhulu ngesilinganiso esiqinile sokuthuthwa kanye nezitshalo zezimboni.
Unalokhu engqondweni, abakhileyo emadolobheni amakhulu kakhulu emhlabeni bebelokhu besebenzisa imaski yobuso isikhathi eside. Futhi, ngesikhathi sentwasahlobo kanye nehlobo, sivezwa izinhlobo ezahlukahlukene zokufafaza, lapho kusetshenziswa khona amayeza okubulala izinambuzane noma ukuvikela omiyane, imikhaza nezinye izinambuzane. Futhi lapho senza umsebenzi wokuhlanza ekhaya, ikakhulukazi ukuhlanza okujwayelekile nokusebenzisa izithambisi ezinamandla, kufanele sisebenzise imaskhi ukuvikela ipheshana lethu lokuphefumula, ukuze singangenisi imiphu eyingozi.
Amaski obuso base-AsiaAma-bielenda facialsI-Bielenda buso bamaskiama-chinese ebusweni busoimaski obuso obuhleimaski yobuso obuhle kusuka kuRossmannimaski yasekhayaimaski obuso obukhethiweimaski eyenziwe ekhaya yomqubukoimaski obuso obukhethiweokuzenzela okuvuselela ubuso busoimaski enhloko eyenziwe ekhayaimaski yezinwele eyenzelwe ekhayaimaski yobuso basekhaya yemibimbiamakhambi asekhaya womamaski wobusoi-hebe facialsHebe ubuso busoindlela yokwenza i-slime ngaphandle kwe-glue kanye ne-maskyini oyincomayo?Amaski wobuso baseJapanImaski yaseKoreaAmaski wobuso baseKoreaIsitolo semaski yaseKorealomi lomi facialsbusoama-anti-smog masksimaski yokuhlinzwaimaski amadodaimaski yobusoubuso busoama-avon buso bamaskiagafia babushka buso bamaskiladybug ubuso busoI-Bielenda buso bamaskiimaski yobuso yamadodaimaski yobuso basekhayaimaski obuso obukhethiweUHebe ubuso busoukuhlanza imaskiukubuyekezwa kobuso bamaskiusezingeni lobusorossmann ubuso busoUSephora obeka busoishidi lobuso bephephaimaski yobuso emihlangeniama-visa ubuso busoziaja ubuso busoubuso bemaski izilwaneimaski yezinweleimaski yasekhayaimaski yobuso basekhayaimaski elahlekayoImaski yaseKoreaimaskhi yobuso be-lorealimaski yezokwelaphaimaski yezindunaimaski yobusoimaski yobuso eyenziwe ekhayaimaski emnyamaimaski yezinweleimaski yokuthambisaukumunyisa ubuso busookuzenzela okuswelayo okwenziwe ngobusoimaski yokuvikelaimaski yokuhlanzaimaski yokuhlanzwa kobusookunika ubuso busohlikihla imaskiimaski isoama-rossmann masksimaski yephrojekthi ye-selfieimaski eshidiimaski eshidi izingcezu ezingama-50imaskhi zeshidi ezisethiweukukhipha imaski yobusobuso bamadodaubuhle be-misshaimaski enhle kunazo zonkeimaskhi yobuso obuhle kakhuluimaski yemveloimaski yobuso bemveloimaski yobuso bemveloukumunyisa ubuso busoizingubo zokukhangisaibhulashi lokusebenzisa imaskhiimaski yobuso enconyiweimaski yobuso bobuchwephesheizindlela zokupheka zobuso ezenziwe ekhayarossmann ubuso busorossmann ubuso busoImaski yobuso baseRussiaubuso be-sephorasephora ubuso busoimaski yesikhumba79amamaki ashibhile futhi amahle ebusweniamaski obuso ashibhile
5 / 5 ( 15 amavoti )